Ny tafika amerikana dia nandidy ny handentika ireo sambo basy iraniana any amin'ny Golfa Persiana
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Ny tafika amerikana dia nandidy ny handentika ireo sambo basy iraniana any amin'ny Golfa Persiana
Ny tafika amerikana dia nandidy ny handentika ireo sambo basy iraniana manenjika ny sambo mpiady amerikana
Ny filoha amerikana Donald Trump dia nibitsika androany fa nandidy ny tafika an-dranomasina amerikana izy mba handrava ny sambo fitifirana iraniana rehetra izay manenjika ireo sambo mpiady amerikana ao amin'ny Golfa Persiana.
"Nanome toromarika ny tafika an-dranomasina amerikana aho mba hitifitra sy handrava ny sambo fitifirana Iraniana rehetra raha manenjika ny sambontsika any an-dranomasina izy ireo," hoy i Trump tamin'ny bitsika nalefany.
Tamin'ny 15 aprily, ny serivisy fanaovan-gazety nataon'ny Navy Navy Fifth Fleet dia nanambara fa ny sambo mitifitra an'ny Iran Revolution Revolution Guard (IRGC) dia nanao fihetsika mampidi-doza teo akaikin'ny sambo miaramila amerikana maromaro tao amin'ny Golfa Persia. Araka ny tatitra dia 50 metatra miala ny sambo mpiady amerikana no tonga ireo sambo basy Iraniana.
Telo andro lasa izay, nanambara ny Tafika mpiambina revolisionera Islamika (IRGC) any Iran fa "vonona ny hamaly" ny "lesoka" amerikanina rehetra any amin'ny faritry ny Golfa Persia.
Aeroflot: olom-pirenena Rosiana maherin'ny 50,000 no tafaverina an-tanindrazana nanomboka ny volana feb
Tsy ilaina ny saron-tava: Soisa hamelombelona ireo teritery COVID-19 amin'ny herinandro ambony